နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > ရီစရာလေးများရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာလေးပါ6
Reply by aungkyawoo1982 on October 14, 2009 at 8:30pm
တစ်နေ.က မင်းအကြောင်းစဉ်းစားပြီှးုငါအိပ်မပျော်နိုင်" လို.ပြောတော့ရွှေကျင်မသောက်ဘူလားတဲ့.............................. "မနေ.က မင်းအရမ်းလှတယ်"်လို.ပြောတော.သနပ်ခါးပါးခွက်ကျားနဲ.နေတာကိုကဲ့ရဲ.နေတာမရှက်ဘူလားတဲ့................. "ဒီနေ. မင်းတော်တော်လှလာတာဘဲ" လို.စကားစတော့ငါအရင်တုန်းကမလှလို.လား စကားပြောရင်နဲနဲကြည်.ပြောတဲ့................. မနက်ဖြန် ကျွန်တောဘာပြော၇မလဲ စဉ်းစားပေးကြပါ ????????????????? aungkaywoo(1982)
Permalink Reply by aungkyawoo1982 on October 14, 2009 at 9:21pm
သဲစားသား....... အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆေးခန်းကိုရောက်လာ၏ " ဒေါက်တာ ကျမသားကို ကယ်ပါအုံး၊ ကျမသားလေး သဲတွေစားလိုက်မိတယ် ၊ဆရာဆီမလာခင် ကျမသူကို ရေတွေအများကြီးတိုက်ထားပါတယ် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟင့်........".အဲဒါဆို အခုခင်ဗျားကလေး ဘိလပ်မြေမစားမိအောင် ဂရုစိုက်ပေတော့".......... *တချိုကျတော့ စွန်လိုက်တာ အပျိုကြီးနှစ်ယောက် စကားပြောနေကြ၏......"အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူရဲ့စတုတ္ထမြောက် ယောက်ျားကိုမီးသဂြိုလ်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းကို ဟိုတစ်လောကကြားလိုက်၇တယ်" ဒုတိယအမျိုးသမီးက သက်ပျင်းချပြီး ပြောသည် လောကကြီးက မတ၇ားဘူး တို့များကျတော့ ခြားပါးလိုက်တာ ရှာလို့ကိုမရဘူး သူတို့များကျတော့လေးယောက်တောင် မီးရှို့လိုက်ပြီ....." *စကားနိုင် လုကြဆို့ ချာတိတ်နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အားကျမခံ စကားနိုင်လုနေကြ၏ .... ပထမ ကလေး - " ငါအဖေက မင်းအဖေထက်သာတယ် ကွ" ဒုတိယ ကလေး - " မဟုတ်ဘူး ငါ့အဖေကသာတယ်" ပထမ -"ငါအစ်ကိုက မင်းအစ်ကိုထက်သာတယ်" ဒုတိယ - " မဟုတ်ဘူး ငါအစ်ကိုကသာတယ်" ပထမ - "ငါအမေက မင်းအစ်မေထက်သာတယ်" ဒုတိယ - " အေး အဲဒါတော့ မင်းမှန်တယ် ငါအဖေကလည်း အဲလို့ပြောတယ်ကွ"....... *မျော်လင့်ချက် ညအချိန်မတော် အိမ်တစ်အိမ်၏ တခါးဝတွင် လူတစ်ယောက်ရပ်နေ၏ ဖြတ်သွားသူကမေးသည် " ခင်ဗျား အိမ်ထဲမဝင်ဘဲ ဘာဖြစ်လို့အပြင်မှာ၇ပ်နေတာလဲ ချမ်းကချမ်းနဲ့" ကျွန်တော်ဒီအိမ်က ဧည်သည်ပါဗျာ "အိမ်၇ှင်က သူ့မိန်းမကို ကြာခိုတယ် ဆိုပြီး အိမ်ထဲကနေမောင်းထုတ်လို့ဗျ....အဲဒါဆိုလည်း ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်လေဗျာ ဘာကြောင့်စောင့်နေတာလဲ " မဟုတ်ဘူးဗျ အိမ်၇ှင်ကစောစောကပြောသံကြားလိုက်တယ် သူမိန်းမကိုပါ အိမ်ပေါ်ကကန်ထုတ်မယ် ပြောနေလို့............ aungkyawoo1982
Permalink Reply by aungkyawoo1982 on October 14, 2009 at 9:22pm
နောက်တစ်ရွက်နဲ့ခိုးတယ်ဆို ဆရာမက ငါကို အထင်လွဲ > ခိုးတယ်လို့ နာမည်ကြီးတော့ ရှင်းပြဖို့ကခက်နေလဲ > စာရွက်က သက်သေပဲ မိတ္တူဆိုင်မှာ copy ချ > လိုရင်းက ဘာလဲဘာလဲ > ၁၀ တန်းဆိုတာ ထပ်ကျသွား ... ။ > > ၁၀တန်းဖြေမဲ့ညတွေဆို ကိုယ်အိမ်ကိုတောင်မပြန်ခြင်ခဲ့ > မိတ္တူဆိုင်မှာကျောခင်းရင်းနဲ့ ဒီလိုနဲမိုးတောင်လင်းပေြါ့ > မိတ္တူဖိုးက ရက်ရက်စက်စက် အကြွေးတွေတင်တော့ > ကုန်လုအောင်ပြုတ်တာများ မိတ္တူဖိုးနဲ့ ကြွေးနာကျပေါ့ > > ဒါအကြွေးတဲ့လား ... အိမ်ဂရမ်ပေါင်ပြီးဆပ်ပါပြီ > မင်းကျေနပ်ပါတော့ > ကိုယ် အချုပ်ထဲရောက်နေပြီ... > နားနား နား န နန နား > > "မင်းရဲ့ မျက်လုံးလေးကတော့ > တစ်ဖက်ကစွေကာ တစ်ဖတ်ကစောင်းနေတယ်။" > aungkyawoo1982
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on October 18, 2009 at 4:12pm
တစ်နေ့မှာ ရုတ်တရက် မိုးရွာချလာလို့ စိတ္တဇဝေဒနာသည်တွေအားလုံး အင်္ကျီ၊ ဇလုံတွေ ယူပြီး မိုးရေဆင်းချိုးကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်က ရေမဆင်းချိုးဘဲ ဝရန်တာမှာ ရန်နေတာတွေ့လို့ ဆရာဝန်က "ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ သူတို့နဲ့အတူ ရေမဆင်းချိုးတာလဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။ လူနာပြန်ဖြေလိုက်တာက... "ကျွန်တော် ရေနွေးတဲ့အထိ စောင့်နေတာပါ" ဟူတည်း။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on October 18, 2009 at 4:13pm
ဆရာဝန်က စိတ္တဇဝေဒနာသည်တွေ စိတ်အခြေအနေ တိုးတက်မှု ရှိမရှိ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဆရာဝန်က နံရံတစ်ခုပေါ် တံခါးပေါက်ပုံဆွဲပြီး လူနာတွေကို "ဒီတံခါးပေါက် ဖွင့်နိုင်တဲ့သူကို ဒီအခန်းက လွတ်ပေးမယ်" လို့ ပြောပြီး စမ်းသပ်လိုက်တယ်။ ဆရာဝန်စကားကြားတာနဲ့ ရှိသမျှ လူတွေအားလုံး တံခါးပေါက်ကို ပြေးဖွင့်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်က နေရာမှာတင် ထိုင်နေခဲ့လို့ ဆရာဝန်က သူ့စိတ်တိုးတက်မှုရှိပြီ ထင်ပြီး မေးလိုက်တယ်။ "ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ သူတို့လို တံခါးသွားမဖွင့်တာလဲ" လူနာက ဆရာဝန်ကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီး ဖြေလိုက်ပါတယ်။ "အဲဒီတံခါးသော့က ကျွန်တော့်ဆီမှာဗျ..."
ဝေဒနာသည်တစ်ဦးက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လဲပြီး သီချင်းဆိုနေခဲ့တယ်။ သီချင်းဆိုရင်းဆိုရင်း ပက်လက်လှန်ဆိုနေရာက ရုတ်တရက် မှောက်ရက်လဲပြီး ဆက်ဆိုပြန်တယ်။ ဒါကို ဆရာဝန်က မြင်တော့ "ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ ဟိုလှန်ဒီလှန် လုပ်နေရတာလဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။ သူပြန်ဖြေလိုက်တာက "ခင်ဗျား သိပ်တုံးတာပဲ? အေဆိုက်ကုန်လို့ ဘီဆိုက်လှန်လိုက်တာပေါ့" ဟူတည်း။
နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကြီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် တပည့်တစ်ချို့နဲ့အတူ ကျေးရွာတစ်ရွာကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ခဲ့သတဲ့။ ရွာရဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို ပါမောက္ခကြီးဟာ စနစ်တကျ လေ့လာတယ်။ မှတ်သားတယ်။ မေးမြန်းတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့..... မွေးမြူရေးသမားတစ်ဦးနဲ့ ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာ မွေးမြူရေးသမားက သူမွေးထားတဲ့ နို့စားနွားမတွေ လွှတ်ကျောင်းထားတာကို ကြည့်ပြီး... "ဟို စာဥဆိုတဲ့ ကောင်မ ဘယ်သွားဦးမှာလဲ?" "တိမ်ပြာဆိုတဲ့ ဟာမကလည်း ဟိုဘက်ခြံစည်းရိုးတိုင်ကို သွားပွတ်နေပြန်ပြီ" "ဟဲ့ ဖြူ မြက်ကောင်းကောင်းမစားဘဲ ဘာဖြစ်လို့ တခြားကောင်မတွေကို လိုက်ဝှေ့နေတာလဲ" စသည်ဖြင့် လှမ်းလှမ်းပြီး မြည်တွန်တောက်တီးနေတယ်။ ပါမောက္ခက လယ်သမားကို အံ့သြတကြီး ကြည့်ပြီး.... "ခင်ဗျားက ခင်ဗျားနွားမတွေအားလုံး နာမည်မှတ်မိတာပဲလား" လို့ မေးလိုက်တယ်။ "မှတ်မိတာပေါ့ ဆရာကြီးရယ်။ သူတို့နာမည်မှတ်မိမှ သူတို့ကို ထိန်းရလွယ်တာ" "တော်တယ်ဗျာ၊ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်တပည့်မတွေ နာမည်ကို မမှတ်မိပါဘူး" ဒီအခါမှာ မွေးမြူရေးသမားရဲ့ ဇနီးက ဝင်ပြောတယ်။ သူမရဲ့ ပြောစကားကြောင့် ပါမောက္ခကြီးရဲ့ ဘေးက ကျောင်းသားတွေ ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားကြသတဲ့။ မိန်းမကြီး ပြောတာက ဒီလိုလေ... "ဆရာကြီးက ဘယ်မှတ်မိမလဲ၊ ကျွန်မယောက်ျားလို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် နို့မှ မညှစ်ရဘဲ" --
Permalink Reply by aungkyawoo1982 on October 21, 2009 at 8:58pm
အသကုန်ရီရတယ်နော်............. သတင်းခေါင်းစဉ် ၁။ မျဉ်းဝါမှတစ်ဆင့် လမ်းဖြတ်ကူးသူများ ဖိနပ်စီး၍ လမ်းလျောက်လျက်ရှိ၊ ၂။ AIDS ရောဂါကို လူတိုင်းကြောက်ရွံ့၊ ၃။ တရားသူကြီးများ တရားစီရင်ရေးကိစ္စဆွေးနွေး၊ ၄။ နှာခေါင်းတွင် အပေါက်နှစ်ပေါက်မပါပါက လူများအသက်ရှုရာတွင် အခက်အခဲတွေ့နိုင်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များဆို၊ ၅။ အခိုးခံရသော ပန်းချီကားများ ပျောက်ဆုံးလျှက်ရှိ၊ ၆။ ကျောင်းသားတစ်ဦး ကျောင်းကားပေါ်တွင် ကျောင်းသားများနှင့် စာအကြောင်းဆွေးနွေး၊ ၇။ နားမကြားသူများ နားကြားကိရိယာအသုံးမပြုပါက နားကြားရမည်မဟုတ်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများပြောကြား၊ ၈။ ခရီးသည်တင်ကားများတွင် ထိုင်ခုံမရပါက မတ်တတ်စီး၍ လိုက်ပါနိုင်၊ ၉။ မဆင်မခြင်သောက်သုံးမှုကြောင့် အရက်သမားတစ်ဦး အမူးလွန်၊ ၁၀။ ရထားစီးစဉ် ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ထားပါက လေကောင်းလေသန့်ရနိုင်၊ ဘီယာအဖြတ်တော်သူ တစ်ခါတုန်းက မန္တလေး နည်း ပညာ တက္ကသိုလ် ကြီးမှာပေါ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ရှိတယ် -ဘိတ် ကြီး ရယ် ၊ သိုး ကြီးရယ် ၊ ငှက်ဖကြီးရယ်တဲ့။ သူတို့က သောက်ဖော် သောက် ဖက် တွေပေါ့ ကွယ်။ သူတို့က အရမ်းချစ်ကြတဲ့အတွက် သောက် တိုင်းမှာ ညီတူမျှတူ သောက်လေ့ ရှိတယ် တဲ့။တစ်နေ့ ကျောင်းပိတ်ချိန် သူတို့ ခွဲသွားရတဲ့အချိန်မှာ............................ ဘိတ်ကြီးတစ်ယောက်ထဲ ဘီယာဆိုင်ထဲ ဝင်လာသည်။ထို့နောက် ဘီယာသုံးခွက် မှာ ပြီး တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်လေသည်။ထို့နောက် သုံးခွက် ထပ် မှာသည်။ထိုအခါ စားပွဲ ထိုးက ဘီယာ အေးအေး သောက်ချင် ပါ က တစ် ခါထဲ သုံးခွက် မှာ ရန် မလို ကြောင်း၊ တစ်ခွက် ကုန် လျှင် နောက်တစ်ခွက် သူငဲ့ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောလေသည်။ ထို အခါ ဘိတ်ကြီး -မင်း ဘာသိလို့လဲ ကွ၊ ငါ့မှာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ကွ၊ သူတို့နှစ် ယောက်စာအတွက် ပါ သောက်နေတာ။ နေစဉ်နေတိုင်း ဘိတ် ကြီး သည် ထိုကဲ့သို့ သောက်လေသည်။တစ် လခန့် ကြာသောအခါ ဘိတ်ကြီး တစ် ယောက် ဆိုင်ထဲ သို့ ဝင် လာ ကာ ဘီ ယာ နှစ်ခွက် သာ မှာ လေ သည်။ ထိုအခါ စားပွဲထိုး- နောင်ကြီး၊ ထူးဆန်းလှချည်လား၊ ခင်ဗျား သူငယ်ချင်း တစ် ယောက် များ ဆုံး သွားလို့လားဗျာ။အဲဒီလို ဆို ရင် တော့ စိတ် မကောင်း ပါဘူး။ ဘိတ်ကြီး - ဟာ မဟုတ်တာဗျာ၊ ကျုပ်သူငယ် ချင်းတွေ ဘာမှ မဖြစ်ကြပါဘူး၊ စားပွဲထိုး- ဟင် ဒါဆို ၊ဘာလို့ ဘီယာနှစ်ခွက်ထဲ မှာ တာလဲဗျ။ ဘိတ်ကြီး -အော် ဒါလား ၊ ကျုပ် က ဘီယာ ဖြတ်လိုက် ပြီဗျ၊ ဒီ နှစ်ခွက် က ကျုပ်သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် သောက် တာ။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု မနီသည် အတန်းထဲတွင် အမြဲအိပ်ငိုက် လေ့ ရှိ သည်။ တစ်နေ့ မနီအိပ်ပျော်နေစဉ် ဆရာမ။ ။ မနီ ကမ္ဘာ ကြီး ကို ဘယ်သူ ဖန်ဆင်းခဲ့လည်း မနီ အိပ်အိုက်နေသဖြင့် မကြားသော်ကြောင့် သူမ နောက် တွင် ထိုင်နေ သော ကို ဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့် ထိုး၍ သ တိ ပေးလိုက် သည်။ ထိုအခါ မနီ။ ။" ဘုရားသခင်" ( လန့်သွား သဖြင့် ရောင်၍ အော်လိုက်သည၊် ထို့နောက် သူမ ပြန်လည် အိပ် ပျော်သွား ပြန်သည်)။ ဆရာမ။ ။ တော် လိုက် တာ၊ နောက် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်၊ တို့ ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် က ဘယ်သူလဲ သမီး ဆရာမမေး သည် ကို မနီမ မကြား ၊ အိပ် လို့ ကောင်း နေသည် ၊ ထို့ ကြောင့် ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်ဖြင့် ထိုး၍ သတိ ပေး ရပြန် သည်။ မနီ။ ။ (လန့်သွားပြန် သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက် တဖန်အိပ်ပျော်ပြန်လေသည် ) " ဂျီးဆပ် ခရစ်" ဆရာမ။ ။ မှန် ပါ တယ်၊ ဆရာမ နောက်ဆုံး တစ် ခု မေး ချင် တာ ကတော့ ၂၃ ယောက်မြောက် ကလေး မွေးပြီးတဲ့နောက် မှာ ဧဝ က အာ ဒမ် ကို ဘာ ပြောခဲ့ လည်း ။ ဒီတစ်ခါ တော့ ကို ဖြိုး အိပ်ပျော်နေသော မနီ ကို ဘော့ ပင်နှင့် နာနာ ထိုး၍ သတိပေးလိုက်သည်။မနီ အတော် နာ သွား သည်။ထို့ကြောင့် အိပ် ယာ မှ နိုး လာ သဖြင့် ရုတ်တရတ် ထလိုက် ကာ မနီ။ ။ နောက်တစ် ခါ ငါ့ ကို ထပ် ထိုး ရဲ ထိုးကြည့် ၊ နင့် ဟာ ကို ထက်ပိုင်း ချိုးပစ်မယ် ဆရာမခမျာ ဘုမသိ ဘ မသိ ဖြင့် သတိလစ် သွား ရှာသည်။ ဘဲနင်းမိသူ....:P လူသုံးယောက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်လာတယ်။ ဂိတ်ဝမှာစိန့်ပီတာ (ဂိတ်ဝစောင့်တဲ့တမန်တော်)ရပ်နေတယ်(ဝင်ခွင့်ဗီဇာစစ်တယ်ပေါ့ဗျာ)။ ကောင်းပြီ အချက်အလက်ပြည့်စုံတယ်…မောင်မင်းတိုို့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်နိုင်ပြီ။ တစ်ခုတော့မှာချင်တယ် ဒီမှာ"ဘဲ"တွေသိပ်ပေါများတယ်…ဒါပေမယ့်…"ဘဲ"တွေကို တက်မနင်းမိစေနဲ့လို့ စိန့်ပီတာကအသေအချာမှာကြားပြီးဂိတ်တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ကောင်းကင်ဘုံမှာခြေချဘို့တောင်အတော်ခက်ခဲအောင်"ဘဲ"တွေကိုဖွေးဖွေးလှုပ်မြင်ရတာ အံ့စရာပါတဲ့။ ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့လူသုံးယောက်ထဲက တစ်ယောက် "ဘဲ" တစ်ကောင်ကိုနင်းမိတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလို စိန့်ပီတာရောက်လာတယ်။ အဲဒီလူနဲ့ရုပ်ဆိုးလွန်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုအတူတွဲချည်ပြီး "ကဲ…ဘဲကိုတက်နင်းမိသူ မောင်မင်း ရရှိသင့်တဲ့အပြစ်ဒဏ်က ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သံသရာတိုင်အောင်ပေါင်းသင်းနေထိုင် စေသတည်းတဲ့"။ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်က "ဘဲ"ကို နင်းမိပြန်တာပေါ့။ မြန်လိုက်တဲ့စိန့်ပီတာ လှစ်ခနဲရောက်လာတယ်။ ဒီတစ်ခါပိုလို့တောင်ရုပ်ဆိုးတဲ့ အမျိုးသမီးပါလာတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းအပြစ်ဒဏ်ကတော့ မကွဲမကွာအနှီအမျိုးသမီးနဲ့ ရာသက်ပန်ပေါင်းသင်းစေသတည်းပေါ့။ နောက်ဆုံးလူကတော့ အတော်သွေးပျက်နေတယ်။ ရုပ်ဆိုးတဲ့မိန်းမနဲ့အိမ်ထောင်ကျမှာသူသိပ်ကြောက်တယ်။"ဘဲ"မနင်းမိအောင်အရမ်းကို ဂရုတစိုက်နေလိုက်တာအတော်ကြာကြာဘဲတဲ့။ သူကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့နှစ်ပါတ်လည်နေ့ ရောက်တော့ စိန့်ပီတာရောက်လာတယ်။ ညနေဆည်းဆာမှာသူ့ကိုသာယာလှပတဲ့ကမ်းစပ်ကို ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီမှာအလွန်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တဲ့။ သေချာတာကတော့ သူနဲ့အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့စုံဖက်ပေးတော့မှာပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စိန့်ပီတာကို မေးလိုက်တယ်…"အရှင်အဘယ်အမှုအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးအနှီကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့် ထိုက်တန်ရပါသလဲ"။ စိန့်ပီတာမဖြေခင်ဘဲ အမျိုးသမီးကဝင်ဖြေလိုက်တယ်… "ရှင့်ကိစ္စကိုတော့မသိပါဘူး…ကျွန်မအပြစ်ကတော့တချက်ကလေး သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီသောက်ဘဲတစ်ကောင်ကိုနင်းမိတာပါဘဲ" ..လို့စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးပြောလိုက်သတဲ့။ ကဲ…နောက်ဆုံးတတိယလူဘယ်လိုဆိုတာသဘောပေါက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လက်စသတ်တော့ သူကိုယ်တိုင်ကရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သူဖြစ်နေတော့တာကိုး။ လူဆိုတာက ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုသိပ်မစဉ်းစားကြဘူးနော်။ သူရဲ့ထိုက်တန်မှုကြောင့်ကောင်းမှုခံစားကြတယ်လို့တဘက်သတ်ထင်ကြတာကလား။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ…ရုပ်ဆိုးလို့စိတ်ဓါတ်တော့မကျနဲ့ပေါ့ဗျာ။ "ဘဲ"နင်းမိသူတွေထဲက ချောမောလှပသူလေးတွေရနိုင်ပါသေးတယ်။ (၁)ရှက်လို့ ဒီနေ့ အရှက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပတာ သမီးပထမရတယ် မေမေ ဟုတ်လား ။ ဘာတွေဆုချသလဲ သမီး... မသိဘူး မေမေ ... ရှက်တာနဲ့ ဆုတက်မယူခဲ့ဘူး.... (၂)ရောဂါဟောင်း ဆေးကျောင်းဆင်းကာစ ဆရာဝန်တစ်ယောက်သည် သူ့ဆေးခန်းသို့ပထမဆုံးရောက်လာသည့်လူနာကို စမ်းသပ်ရင်း ရောဂါရှာမရသဖြင့် ချွေးပြန်လာသည်။ ထို့နောက် အကြံတစ်ခုရပြီး လူနာကိုမေးလိုက်တယ်... ခင်ဗျား အရင်က ဒီရောဂါဖြစ်ဖူးလားတဲ့ ဟုတ်ကဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ဖြစဖူးပါတယ် ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆို အဲဒီရောဂါ ပြန်ထတာပဲ (၃)ရပ်မပေးနိုင်ပါ ဗျို့ ကားဆရာခဏရပ်ပါဦး။ နောက်က တွယ်စီးတဲ့ လူတစ်ယောက် ပြုတ်ကျကျန်ရစ်ခဲ့လို့။ ကိစ်စမရှိဘူး။ သူ့ဆီက ကားခရပြီးသားပါ။ (၄)မောင့်အချစ်ကပိုပါတယ် ရှင်က ကျွန်မထက် အရက်ကို ပိုချစ်တယ်ပေါ့လေ ၊ ပြောစမ်း။ မိန်းမရယ် မင်းကိုတစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီလုံးချစ်တာပါ။ အရက်ကိုတော့ တစ်နေ့မှ တစ်ပုလင်းတည်း ချစ်တာပါ။ (၅)ဒီလောက်ပဲတက်ဖို့လိုတယ် ငါ့သား မင်းကျောင်းနေတာ ကြာလှပြီ။ ၁ ကနေ ၁၀ အထိပဲ ရေတက်ပြီး၊ ဒီထက် ပိုမရေတက်သေးဘူး။ ကြီးလာရင် ဘာလုပ်စားမှာလဲ ။ လက်ဝှေ့ပွဲမှာ ဒိုင်လူကြီးလုပ်စားမယ်။ (၆)ကယ်တော်မူပါ သူငယ်ချင်း၊ ဘာတွေ အလိုမကျ ဖြစ်ပြီး မျက်နှာရှုံမဲ့နေရတာလဲ။ ငါ့ညီလေကွာ ၊ ဆိပ်ကမ်းမှာ အလုပ်သမားဝင်လုပ်နေတယ်လို့ သတင်းကြားတယ်။ ဒါများဗျာ၊ အလုပ်လုပ်တာပဲဟာကို ၀မ်းသာရမှာပေါ့ ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ ၊ ဒီကောင့်ကြောင့် ကျုပ်တို့တမျိုးလုံး အပြောခံရမှာ။ ကျုပ်တို့ အမျိုးထဲမှာ ဘယ်သူမှ အလုပ်လုပ်စားတာ မရှိဘူး။ (ရ)ဒါလည်းဟုတ်သားပဲ ကျွန်တော် ခရီးပန်းလာလို့၊ ဒီမှာတစ်ညလောက် တည်းခွင့်ပြုပါဗျာ။ ဟင့်အင်း... အိမ်မှာ လူမရှိဘူးရှင့်။ ခင်ဗျားက လူမဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်မ ဆိုလိုတာက ယောကျာ်းသား မရှိတာကို ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်က ယောကျာ်း မဟုတ်လို့လားဗျာ။ (၈)သူ့ကြောင့်မိုပါ မင်းတို့ဆိုင်က ကြက်ဥတွေ သေးလှချည်လား၊ ခပ်ကြီးကြီးလေးလုပ်စမ်းပါ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဥတာမဟုတ်လို့၊ ကြက်မကို သွားပြောပါ ခင်ဗျာ။ (၉)မှားတက်ပလေ ၀တ်ချင်သလို ၀တ်နေကြတဲ့ခေတ်ပဲ၊ ဟိုကလာနေတာ အင်္ကျီအကျား၊ ဆံပင်ဖားလျား၊ဘောင်းဘီတို နံ့နံ့ နဲ့ အထီးလား၊ အမလားတောင် ခွဲလို့မရဘူး။ အဲ့ဒါ... ငါ့သမီးပါ။ အော်... ခွင့်လွှတ်နော်။ ဦးလေးသမီးမှန်း မသိလို့ပြောမိတာပါ။ ဟကောင်ရ... ငါက သူ့အမေကွဲ့။
Permalink Reply by aungkyawoo1982 on October 23, 2009 at 8:50pm
ဟာသလေးပါ ကျားသဘာဝ လက်ထပ်ပြီးစ တဖွဖွနဲ့သူကပြောကြား ချစ်စကား “ငါ့မိန်းမဟာရေဆေးငါး” ကလေးငါးယောက် အရွယ်ရောက်တော့ မထောက်မညှာ “ဒီအဖွားကြီးဟာ အာပလာ” ဘဘလွမ်းချင်း မနက်စောစော ကျုံးပတ်ပြေး လေ့ကျင့်ကျန်းမာရေး…………. မဒီပျိုလေးများ နောက်ကပါ ဘ၀င်တွေခိုက် ရင်ထဲမှာ တူယှဉ်က ပြေးလို့ ထား ရင်ခုန်တာလေ တအား……….. ပြေးရင်းလွှားရင်းငယ်ချင်တယ် ကိုယ့်အသက် ကိုယ်သိတယ် ခြောက်ဆယ့်ရှစ်ထဲကပ်နေတော့ သေချင်မိတာပေါ့ a.k.o(1982)
Permalink Reply by aungkyawoo1982 on October 23, 2009 at 9:06pm
နောက်ဖေးခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါ..... > .နောက်ဖေးခန်းကို လိုက်ခဲ့ပါ" > တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ ဘဲကင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲ ဝင်ပြီး > ဘဲကင်ဝင်ဝယ်တော့။ > ဘဲကင်မဝယ်ခင် ကောင်တာက အရောင်းစာရေးမကို ဘာဘဲအမျိုးအစားတွေ > ရှိသလဲလို့ မေးတော့.....။ > > စာရေးမ...."ကျွန်မတို့မှာ ပီကင်းဘဲ နဲ့ နန်ကျင်းဘဲဆိုပြီးရှိတယ်။ > ဘယ် ဘဲ မျိုးကို လိုချင်ပါသလဲ" > > လူငယ်..... " ဘာများကွာလို့လဲဗျ..ပြီးတော့ ဘယ်လိုခွဲခြားသလဲ ဟင်..." > > စာရေးမ..." ဟုတ်ကဲ့...နောက်ဖေးခန်းကို လိုက်ခဲ့ပါ" > > ဘဲအမျိုးအစားကို ခွဲခြားဖို့ စာရေးမက လူငယ်ကို မီးဖိုခန်းထဲခေါ်သွားခဲ့တယ်။ > အဲဒီနောက် ဘဲလှောင်အိမ်ထဲက ဘဲတစ်ကောင်ကို ထုတ်ပြီး ဘဲဖင်ကို > လက်နဲ့တို့လိုက်တယ်။ ဘဲက "ဂွတ်.. ဂွတ်" နဲ့ ထအော်တယ်။ > > စာရေးမ... "ကြားလား.. ဒီလိုအော်တာက နန်ကျင်းဘဲ" > > စာရေးမက နောက်ဘဲတစ်ကောင်ကို ထုတ်ပြီး ဖင်ကိုလက်နဲ့ တို့ လိုက်ပြန်တယ်။ > ဘဲက "ဂတ်.. ဂတ်."နဲ့ ထအော်တယ်။ > > စာရေးမ... "ကြားလား .. ဒီလိုအော်တာ ပီကင်းဘဲ" > လို့ လူငယ်ကိုရှင်းပြတယ်။လူငယ်က ဘဲကင်တစ်ကောင်ကိုဝယ်ပြီး > ဆိုင်ကလှည့်ထွက်ခါနီးမှာ စာရေးမကို မေးလိုက်တယ်။ > > လူငယ်..... "ဒါနဲ့ ခင်ဗျားက ဘယ်မြို့ကလဲခင်ဗျ.. " > > စာရေးမ..." ဟုတ်ကဲ့...နောက်ဖေးခန်းကို လိုက်ခဲ့ပါ" > > ခဏ ငှါးပါလား > တစ်ရက်.... ကိုစငူ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုက ထွက်အလာ တစ်မူထားခြားတဲ့ ဈာပနချပွဲ > အခမ်းနားတစ်ခု ကိုတွေလိုက်တယ်။ > ဈာပနချမဲ့ အခေါင်း တစ်ခုရဲ့ နောက်မှာလဲ ပေ ၅၀ လောက် ကွာပြီး နောက်ထပ် > အခေါင်းတစ်ခုက ကပ်ပါလာတယ်။ > ဒုတိယ အခေါင်းရဲ့ နောက်မှာတော့ ခွေးမဲကြီးတစ်ကောင်နဲ့ လူတစ်ရောက် > လမ်းလျှောက်ရင်းလိုက်လာတယ်။ > အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်မှာတော့ အမျိုးသား ၂၀၀ လောက် တန်းစီပြီး လိုက်ပါလာကြတယ်၊၊ > ကိုစငူ သိလိုစိတ်က ဘယ်လိုမှတားမရနိုင်တော့တာနဲ့ ခွေး ကိုင်ထားတဲ့ > လူနား အသာလေးကပ်သွားပြီး.........။ > > ကိုစငူ ။....။ " မိတ်ဆွေရဲ့ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျ....ဆုံးရှုံးမှုတွေတွက်တော့ > စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ခုချိန်မှာ မိတ်ဆွေကို အနှောက်ယှက်ပေးဖို့ > မသင့်တော်မှန်းလဲ > ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ... ကျွန်တော်ဘဝမှာ ခုချိန်ထိဒီလို ဈာပန > အခမ်းနား ကျင်းပတာမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံဖူးလို့ပါ။ဘယ့်သူ့ ရဲ့ ဈာပန > မို့လဲဗျ၊....." > > ထိုလူက တည်ငြိမ်စွာပဲ ပြန်ဖြေတယ်... > > "ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်က John ပါ.. ပထမ အလောင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမပေါ့..." > > ကိုစငူ ။....။" မိတ်ဆွေ ရဲ့ မိန်းမက ဘာဖြစ်လို့ ဆုံးသွားတာလဲဗျ..."""" > > John ။....။" အင်း....ကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ ဒီခွေးလေ...ဒီကောင်ကြီးကိုက်လို့ > ဆုံး သွားတာပေါ့။..." > > ကိုစငူ ။....။" ဒါဆိုဗျာ နောက်ထပ်အလောင်းတစ်ခုကရော ဘယ်သူ့ အလောင်းလဲဗျ..." > > John ။....။" အော် အဲ့ ဒါကတော့ ကျွန်တော့် ယောက္ခမ ကြီးပေါ့။ သူကလဲသူ့ သမီးကို > ခွေးကိုက်နေတာတွေ့တော့ ဝင်ကူညီရင်းသူပါခွေးကိုက်ခံရပြီး ဆုံးသွားတာပါ။" > > နှစ်ယောက်သား ခဏအကြာတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ် > ခဏအကြာမှာတော့ ကိုစငူ စိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ မေးလိုက်တယ်...... > > ကိုစငူ ။....။" ခင်းဗျားရဲ့ ခွေးကို ကျွန်တော့် ကိုခဏ ငှါးပါလား
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:09 AM